China Junlian Hong yepamusoro mhando nhema tii fekitori uye vagadziri | Yibin Tea
DZIMWE BUDU DEMA DZEMA
Mabasa aJunlian Hong nhema tii: Wirisa muviri uye ramba kutonhora. Yakapfuma mumapuroteni neshuga, inopisa uye inopisa dumbu. Inogona kuchengetedza dumbu, kubatsira kugaya uye kubvisa girizi. Inogona kudzivirira kutonhora, futi.
Yibin / chongqing chiteshi
Sichuan red congou nhema tii inogadzirwa muYibin, Dunhu reSichuan nedzimwe nzvimbo, inogadzirwa muma1950s congou nhema tii. Kwemakore anopfuura makumi matatu, vamiririri vemuChuanhong vari "Linhu", "Palace" uye "Mutambo Husiku" zvigadzirwa zvemhando. Iine mhando yakanaka yeakasunga uye yakatenderera tambo, yakanaka uye yakatwasuka, yakajeka uye yakatsetseka ruvara, inonhuhwirira uye yakanyanya kunaka, Chuanhong inotengesa musika wepasi rose uye yave imwe yemhando yepamusoro congou nhema tii yekukwira nyeredzi muChina.
Hunyanzvi hwekugadzira weSichuan Gongfu Nhema Tea yakave isingaonekwe tsika yemagariro eSichuan Province muna 2014
Sichuan tsvuku congou nhema tii nyeredzi inomuka ye congou nhema tii. Maumbirwo emafuta etambo akapoterera, anoratidza goridhe Ho, dema ruvara Zewu mafuta embellish; Mushure mekubika, ine hwema hutsva neshuga yeorenji, mellow uye mutsva kuravira, gobvu uye inopenya muto wemuto, gobvu, nyoro uye kunyange matsvuku mashizha. Iyo nzvimbo yekugadzira inonyanya kuwanikwa munzvimbo yeYibin kumaodzanyemba kweSichuan. Minda yetii ndeyemhando yepamusoro uye miti yetii inokura nekukurumidza uye inopinda mumusika muna Kubvumbi. Iyo tii yakarumbidzwa kwazvo nevepasi rese nharaunda nekuda kwayo kunoshamisa kwehunhu hwepakutanga, nyoro, nekukurumidza uye hwakanaka mhando.
Musi waChikumi 26, 2014, hunyanzvi hwekugadzira weSichuan Gongfu Nhema Tema yakapinda muShuhuan Provincial People's Government ndokuzivisa batch yechina yeSichuan Provincial Intangible Cultural Heritage Project Rondedzero. Yakave yakave yakasarudzika tsika isingabatike yetsika yeSichuan Province. Iine nhoroondo yeanopfuura makore zana, "Chuan Hong Congou" akashandiswa zvakanakira World Heritage, achive wekutanga mutema tii isingabatike yetsika nhaka chirongwa muSichuan Province, iyo inosimudzirawo kusimudzira kweYibin tii indasitiri.
Hunhu hweSichuan Gongfu nhema tii ndeiyi: kunhonga bundu rimwe kana bundu rimwe uye shizha rimwe chete nemashizha ekutanga manyoro emashizha tii matsva mushure mekuoma nekuumburuka, uyezve kuvira. Mashizha eiyo akaviriswa akasvinwa uye akaumbwa ne microwave, ndokuzonongwa ndokuomeswa. Tora chigadzirwa chakapedzwa.
Yakatanga kurongerwa kushandisa tii miti mapundu nemashizha kugadzira nhema tii; kechipiri, mhando yemukati yechigadzirwa yakavandudzwa. Iyo mbishi midziyo yeti nhema yakagadzirwa munguva yakapfuura yaive yakaoma uye yechinyakare zvigadzirwa, zvichikonzera yakaderera mhando tema tii, uye mhando iyi yeti nhema yaive izere negoridhe, mellow uye inotapira. , Pasina kunzwa kwakasimba uye kukurudzira kwechinyakare tii tii, zvinonyanya kukodzera kuravira kwevachena-kora vashandi.
Zvakanakira kunwa Sichuan Gongfu nhema tii
Pashure: GIZA REMAHARA BUDHI